कोरोना म,हा,मा,री,का कारण विदेशमा समस्या परेकालाई फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन – Khabar Silo
कोरोना म,हा,मा,री,का कारण विदेशमा समस्या परेकालाई फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले कोरोना म,हा,मा,री,का कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसरी विदेशमा समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याइएकाहरूलाई सीप प्रदान गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्कन चाहेकाहरुलाई ल्याउन बजेट छुट्याइएको बताए ।
कोरोना म,हा,मा,री,का कारण रोजगारी गुमाएर विदेशका धेरै अलपत्र छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यो कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ ।
आगामी वर्ष साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । त्यस्तै ७५ हजार सीपमूलक तालिम दिनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।
सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब छुट्याइएको खतिवडाले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पुँजी दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा सरकारले ४१ अर्ब विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएका दुई क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब थप गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब ७८ करोड रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सरकारले बढाएर ९० अर्ब पुर्‍याएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार कोरोना संक्रमण लगायत सबै रोग तथा संक्रमणबाट नागरिकलाई बताउँन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासमा जोड दिइएको बताए । डा खतिवाडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा स्वास्थ्य प्रर्णालीमा सुधारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
उनले कोरोनाको उच्च जोखिमको क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन क्वारेन्टाइनको स्थानपना गर्न र त्रास सम्बोधन गर्न स्रोतको व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ६ अर्व बजेट व्यवस्थापन गरेको बताए । यस्तै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको लागि ५ लाख सम्मको निशुल्क स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याकाका सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा २ सय ५० शय्याका आइसीयु वेड स्थापना र सबै प्रदेश अस्पतालमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने भएको छ ।
हाल (सोमबार बिहान) देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले अघि बिहान ६ बजे दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश नं १, २, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पनि अहिले वर्षा जारी छ। मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार […]
Posted on April 23, 2021 April 23, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएकाआइसियु र शयया भरिएका छन्। शयया भरिएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको जनाएका छन्। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका शयया भरिभराउ भएपछि अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको पाटन अस्पताल कोभिड १९ उपचार संयोजक डा. विमल पाण्डेले बताए। पाटन अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि […]
हार्दिक बधाई बीबीसी मास्टर सेफको उत्कृष्ट ८ मा नेपाली सेफ सन्तोष
विश्वकै प्रतिष्ठित टिभी रियालिटी शो ‘बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स् यूके प्रतियोगिता २०२० ’ मा सहभागीता जनाउँदै आएका नेपाली सेफ सन्तोष साह सेमिफाइनल राउण्डबाट पनि छनौट भएका छन् । मंगलबार साँझ बीबीसी वानमा प्रसारित दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धीमा अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट ८ मा पर्न सफल भएका हुन् । उक्त राउन्डमा सन्तोषले रोस्टेड काँक्रोको बिँया, पोलेको […]
अब के हुन्छ ? चीनले यति धेरै सैनिक भारतको सीमामा पठायो